Iindevu zobuxoki emadodeni, zisetyenziswa njani? | Amadoda aQinisekileyo
Iindevu zobuxoki emadodeni anamhlanje
UIgnacio Sala | | Ukunyamekela
Ukusukela oko kwafika imfashini yehipster kunye neendevu zayo ezinzulu, uninzi lwabo ibingabantu abathi, ngenxa yokuswela umnqweno okanye ubuhle, baqala ukukhulisa ezo ndevu zinzulu ziimpawu zalo mkhwa mtsha, unxulunyaniswa nokuvuna, nangona kunjalo singayibeka kwiminyaka ye-20, apho olo hlobo lweendevu lwaluyinto eqhelekileyo yesiqhelo yexesha.
Kubasebenzisi abaninzi yi Ukuthuthunjiswa okwenyani kufuneka uchebe yonke imihla, kodwa kuxhomekeke kwisikhundla sabo somsebenzi, ukuba iphambi koluntu okanye iofisi, abanakukhetha. Ukuba bafuna ukukhula iindevu ezinesidima, kuya kufuneka balinde iiholide ukuba bazilinde ukuba zikhule ngokwaneleyo ukuze bakwazi ukubumba kwaye bangakhangeleki bekrwada.
Kwelinye icala, ukuba umsebenzi wakho awujonganga eluntwini, okanye nangona uluntu olujongana nalo nabalamli nje, inkangeleko yobuhle inika indlela kwimvelaphi, ngalo mzuzu ufuna ungazikhulisa iindevu kwaye uqalise ukuyibumba njengoko ikhula.
Kwelinye icala, awunazinwele okanye omnye wabo bantu iindevu zabo ziphuma kwiindawo ezahlukileyo zobuso hayi kwindawo yesiqhelo, unengxaki enkulu ukuba uyafuna ukonwabela iindevu, ibhokhwe okanye nje Amadevu. Kwi-intanethi sinokufumana izisombululo ezahlukeneyo, ngakumbi nangaphantsi kobuchwephesha, oko sivumele ukonwabela ngokukhawuleza uhlobo lweebhokhwe, iindevu okanye iindevu.
1 Iindevu zenkohliso
2.2 Sebenzisa isiponji
4 Iinwele zendalo ngeVaselina
Kodwa ukuba ukungabikho kwentshebe kuyingxaki kuwe, isisombululo kuphela kukufumana iindevu ezingezizo, ezifana neewigi zamadoda, zenziwe ngoku kwiimpawu ezahlukeneyo, nkqu nokunikezela ngeziphumo zobungcali, kuba ukugqitywa kusinika ibhokhwe okanye iindevu ezichetyiweyo apho zonke iinwele eziyenzileyo zisikwe kubude obufanayo, ukongeza ngamanye amaxesha zenziwa ngeenwele zendalo.
Iindevu ezahlukileyo, amaqhina kunye nokutshiswa kwamacala, sinokuzifumana ngemibala eyahlukeneyo kunye namagqabi ukulungela konke ukuthanda. Ngaphakathi kweendevu zobuxoki, eyona ilula ukuyifumana zizele iindevu kunye neemadevu. Kuxhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali esinalo, sinokufumana iimodeli ezipheleleyo kunye nomgangatho olungileyo, ukusuka kwi-100 euro.
Ezi ndevu kunye namadevu zisinika umgangatho kunye nesiqinisekiso esingenakufumana ukuba sizinikele ekukhangeleni olu hlobo lwemihlobiso yobuso. kwiivenkile ezingezizo ezobugcisaKe ngoko, ukhetho oluphambili kukuya kumaziko azinikeleyo ekwenzeni ubugcisa, apho ukubonakaliswa kwabalinganiswa kuqhelekileyo kwaye baziqhelanisa nako. Ezi ntlobo zeevenkile zihlala zifumaneka kuphela kwizixeko ezikhulu, kodwa kangangexesha elithile ukuba yinxalenye, sinokufumana iimveliso zazo kumaphepha azo ewebhu.
Ingxaki yokwenza izithambiso, esetyenziswa ngokubanzi ukufihla ukungafezeki kolusu ngabafazi nangamadoda, yile ayikwazi ukulinganisa ubume beendevu, kodwa ukuba ubuncinci ukubonakala kwayo, ngakumbi ukuba sifuna ukubonisa umququ kwiintsuku ezimbalwa ngaphandle kokucheba. Ukusetyenziswa kwemascara yamehlo, enkosi kwibrashi yayo, lolona khetho lufanelekileyo, kuba ukwahlulwa kwemicu yebrashi kusivumela ukuba silingise ukwahlulwa kweenwele.
Kolu hlobo lweendevu, kufuneka sisebenzise isiponji esiqhelekileyo esibonisa imingxunya yesiponji. Ngombala weendevu kufuneka sisebenzise i Cream umbala weendevu Sifuna ukulinganisa, ngokucacileyo ekufuneka ihambelane nombala weenwele zethu. Ukwenza le nkqubo, kubalulekile ukuba ngaphambili usike isiponji sibe ngamaqhekeza amancinci asivumelayo ukuba sijikeleze imiphetho yobuso.
Emva kokuba similise ukhilimu kwisiponji, kufuneka sicinezele isiponji kancinci ebusweni ukuze sishiye amanqaku aya kumela uphawu. Gcina ukhumbula ukuba ngaphandle kokucinezela kakhulu, uphawu oluya kushiyeka luya kufana kakhulu kwaye aluzukulunga.
Iibrashi ezivumela ukwenziwa kobuso ukuba zisasaze phezu kobuso bonke nazo zilungele phawula isithunzi seendevu, ukuba into esiyifunayo yile ntlobo yeendevu. Ngeblush ehambelanayo kunye nebrashi sinokusasaza ukwenziwa kuyo yonke indawo apho iindevu kufuneka ziboniswe khona. Olu khetho lolunye lwexabiso eliphantsi kwaye oluncinci ekucombululeni ingxaki yeendevu.
Kude kube namhla, impandla iseyingxaki ekungekho labhoratri ikwazileyo ukunika isisombululo kuyo, nokuba banokubhengeza kangakanani ukuvuselelwa kweenwele kwindawo apho iinwele ziye zawa khona. Ewe ewe, kwingxaki yenkqayi, akukho sisombululo sifunyenweyo, njengoko ikhula ngokungummangaliso iinwele, ayikho nokuba abantu abakhulisa iindevu kwiindawo kwaye bafuna ukugqibezela ezinye iindawo zobuso apho zingafikeleli khona kuvela iinwele. Ke esi sisombululo sinokulahlwa ngokupheleleyo. Usuku esingaboni naliphi na inkqantosi esitratweni, iya kuba lixesha lokuqala ukusebenzisa ukukhula kweenwele.
Iinwele zendalo ngeVaselina
Esinye isisombululo sethutyana esingenakho ukuhlala ixesha elide, ukulungele ukuzibonakalisa ngesinxibo ngokomzekelo, kukusebenzisa ijeli yepetroleum ngeenwele zendalo. bucala ngasekhohlo iinwele zendalo kufuneka zivela kuloo mntu kuthethwa ngaye ukuba uza kuyisebenzisa, ngaphandle koko umahluko kumbala unokutsala umdla omkhulu.
Eli qhinga lincinci kukusasaza ngaphezulu kobuso apho sifuna ukongeza iinwele isiseko se-silicone esingasindi, kodwa ayisiyi-silicone yoshishino esetyenzisiweyo kulwakhiwo, kodwa i-silicone ekhethekileyo esetyenzisiweyo ekwenzeni. Nje ukuba sihambise umaleko ofanayo ngokujikeleza ubuso, kuya kufuneka siqale sincamathisele iinwele kwezi ndawo kuthethwa ngazo. Gcina ukhumbula ukuba iinwele kufuneka zibe ngaphezulu okanye ngaphantsi ubude obufanayo, kungenjalo kunokuba yinto ehlekisayo.
Akucetyiswa ukuba kusetyenziswe iinwele zezilwanyana, njengoko bendibonile kwiividiyo ezininzi, kuba ubhetyebhetye bayo bohluke kakhulu kunoboya babantu, ukongeza umahluko kumbala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iindevu zobuxoki emadodeni anamhlanje
Ndingathanda ukwazi ukuba ndibathenga phi eMexico nakwiphondo laseMexico
Ungandixelela ukuba sele iyathengiswa eMexico kwaye phi, enkosi?
Ndidinga ngokungxamisekileyo ukufumana iindevu, ndingazithenga phi eMexico City?
ULuis Hernandez sitsho
MOLA! Kodwa zintle kangakanani iindevu zobuxoki, nceda undixelele ukuba ingafumaneka eMexico kwaye phi !!!!!! khuthaza !!!!!
Phendula luis hernandez
JASS (ifumaneka ngesiNgesi kuphela) sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba le mveliso izakuba nini eMexico kwaye ukuba andicebisi mntu ukuba ahambise ichibi elifanayo
UCarlos Ramos sitsho
Hahaha uyayenza nyani loo nto ukuba yinto elungileyo, ngoba kwicala lam andinangxaki kuba ndinentshebe apho ndifuna khona, kodwa kubo bonke abangenazinwele kulungile kakhulu, kodwa ihlala ixesha elingakanani okanye ithini?
Ndikhangela izihombiso zentshebe yohlobo lwepharao, ndenza amalaphu kodwa aswele nto.
Phendula uCarlos Ramos
josue sosa sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba ndiyifumana phi, ndilinde impendulo yakho, ndivela e-Oaxaca, eMexico.
Phendula josue sosa
molo eArgentina uyazifumana ezo mveliso?
Ndikunika iimpundu hahahaha
Ndingathanda ukuba undithumelele idilesi eRancagua
ukuthenga intshebe yasemva kwetshokhwe
Ndidinga iindevu ezingeyonyani ezibonakala ziyinyani.
Iindawo zokuthenga kunye neendleko.
miguel sanchez sitsho
Molo, ndivela eTacna-Peru kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ndingayifumana phi, ndiyifuna ngokungxamisekileyo. Enkosi
Phendula kwimiguell sanchez
bayithengisa phi loo mveliso
ndingayifumana phi eToluca mexico
Uyandixolela kodwa ndifuna ukwazi apho bathengisa khona ipostisa varva nceda ungandinika okanye undithumelele iingxelo
Ndingathanda ukwazi ukuba ungayithenga phi enye yezi eGuatemala okanye indlela yokuyithenga ngewebhu ...
Manuel Rosales indawo yokubamba sitsho
Hee uxolo, ndingayifumana phi eMonterrey?
Phendula uManuel Rosales
Ndithenga intshebe engeyonyani ngokungxamisekileyo, ukubetha kuya kukhawuleza. Ndijonge impendulo yakho.
Ndithenga isilevu esingxamisekileyo sobuxoki ndivela eLima peru intlawulo iyakwenziwa kwangoko ndilindele impendulo yakho
Molo jhanses, ndingathanda ukwazi ukuba ukwazile ukuthenga intshebe engeyiyo, phi kwaye kangakanani, nceda undiphendule
UJEAN ANDERSON GARZON sitsho
Molo, NDINGATHANDA UKWAZI KWI-COLOMBIA APHO NDIFUMANA KHONA LOLU HLOBO LWEEVELE EZINHLE. ENKOSI. UJEAN A.
Phendula u-JEAN ANDERSON GARZON
iJamani ihermosilla sitsho
Ndingayifumana phi eMexico okanye ndisebenzise iindevu zobuxoki kunye nemadevu
ukusuka kwintengiso yokwakha
Phendula igermosilla yesiJamani
UJose Esteban sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba bayithengisa phi kwiRiphabhlikhi yaseDominican
Phendula ujose esteban
Ndifuna ukwazi ukuba ndingayithenga njani le mveliso kwi-intanethi
Petro Velez sitsho
ukuntywilisela iinwele kungabi zii-suckers, iindevu ziphuma kuphela emadodeni
Phendula kwi-petro velez
Ndingathanda ukwazi ukuba bayithengisa phi eColombia kunye nexabiso kuba ndinomdla (: enkosi ………………
Ndidinga ngokungxamisekileyo ukuyifumana. Ndazise apho ndiza kubafumana khona eColombia.
Ndidinga ukwazi indlela yokuthenga iindevu nge-intanethi !!
ITHRAIUCE YOBUVA sitsho
KUFUNEKA IINKCUKACHA ZEMICIMBI NGOKUGQIBELELEYO KWIMEXICO APHO YINOKUTHENZEKA OKANYE IPHEPHA ELINYE KWI-INTERNET UKUZE UTHENGE
Phendula TERIUCE ESPINOSA
semina yempepho sitsho
Ndingayithenga phi kwaye ixabisa malini? phendula ku brisaseminario1@hotmail.com
Phendula kwisemina yomoya
Ezi madevu zibonakala zintle kum, ndivela ePeru, ndingazithenga njani, nceda uphendule brisaseminario1@hotmail.com
Ndingathanda ukuba undinike iwebhusayithi apho ndingathenga khona
inokuphanga ii-osorio cortes sitsho
Yeyiphi imveliso elungileyo endinomdla kuyo, ndingayifumana phi apha eColombia, enkosi kakhulu….
Phendula kwi-robert osorio cortes
iroberto torres sitsho
Ndidinga iindevu namadevu eGuatemala
Phendula kwiiroberto torres
Ijongeka intle kakhulu, ndingayithenga phi eMexico?
uTony hanamichic sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba ndingayithenga phi ePeru
Phendula kwi-tony hanamichic
Ndingayithenga phi eGuatemala ndifuna ukubulela ngokungxamisekileyo
Ndingayithenga phi ndivela eLima Peru
UCristina Garcia sitsho
Ndiyinto engeyonyani kwaye ndiyazinikela ekwenzeni zonke iintlobo zokongezwa kweenwele, nokuba ziindevu, iindevu, ukubetheka ecaleni, okanye iwigi. Kungokwemvelo, ndithumela kulo lonke ihlabathi. Ukuqhagamshelana nam ndikushiya i-imeyile.
Phendula Cristina García
ukhenketho lwasemaphandleni eValencia sitsho
Ndiyamangaliswa ukufumana le bhlog. Ndifuna ukukubulela ngokuthumela le ngqondi. Ngokuqinisekileyo ndikonwabele konke oko. Ndikuphawulile ukubona izinto ezintsha ezivela kule bhlog.
Phendula kukhenketho lwasemaphandleni eValencia
alfredo yesibini montalban jimenez sitsho
Ndifuna ukuthenga i-poztiza ndevu ePeru, ndenze njani?
Phendula kwi-alfredo montalban jimenez yesibini
UAndres I Rodriguez sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba ndiyifumana phi intshebe ekhangeleka indalo, kodwa incinci kakhulu, ndihlala eLos Angeles California 90020.
Phendula Andres I Rodriguez
Luhlobo luni lweentsimbi ezisecaleni ezikwenza ube nomtsalane ngakumbi?
Iingcebiso zokubetha induna xa umdala